Ị nwere ike inyere m aka ịhọrọ akara ikikere Amazon zuru oke iji bute ụzọ ahịa?
N'agbanyeghi ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụdị ngwaahịa ị na-ere na, ị kwesịrị ịdebe peeji nke kachasị mma ka ị nwee ohere dị mma iji mezue ọnụ ọgụgụ na-aba ụba nke ire ere. Ọ bụ ezie na ọ bụ Amazon bụ ụwa na-eduga na ecommerce na mbubata na-ere ahịa na-ere ahịa, ị nwere ọtụtụ ihe na-eme, nke ukwuu iji soro, na nke ukwuu iji melite n'ebe ahụ. Ya mere, olee otu esi ejikwa oge ahụ niile na-ewe ma mgbe ụfọdụ, ị na-arụsi ọrụ ike-ime kpụ ọkụ n'ọnụ? Nke a bụ kpọmkwem mgbe Amazon isiokwu tracker na asọmpi nnyocha ngwaọrụ abata play.
N'ezie, ọ dịghị ngwanrọ kachasị elu ma ọ bụ kpuchie ịntanetị iji mee ihe niile maka gị na njiri onwe gị. Ma ihe ndị Amazon na-esonụ na tracker tools na ndị enyemaka bara uru bara uru nwere ike ime ka ihe dị mfe karị. Ma ọ dịkarịa ala, ndị ahụ gbasara nchọpụta nyocha dị omimi na nghọta bara uru bara uru dị nnọọ mkpa iji dị ndụ na nke ahụ na-asọmpi na ịsọ asọmpi nke ukwuu.
O doro anya, ana m akwado ịme ihe a nke ụwa nnukwu ọchụchọ dị ka ihe kachasị mma ị ga-esi na-aga n'ihu na nyocha ọchụchọ zuru ezu na-eduzi ụzọ ziri ezi site na mmalite. M na-ekwu na ọ bụ ezie na ụdị ngwá ọrụ a abụghị kpọmkwem maka ire ere na Amazon, ọ ka bara uru karịsịa maka ịchọta nnukwu foto nke mmelite ọchụchọ nke ndị ezigbo ụlọ ahịa na-eji na-emeri, yana inwe nghọta nkenke nke mpịakọta ọchụchọ na asọmpi dị ugbu a, karịsịa maka mkpirịtaokwu okwu mkpịsị aka ogologo oge gị.
Cheta na, Google Keyword Planner bụ naanị nzọụkwụ mbụ ị ga-esi na-eduzi ahịa. Ọ pụtara na mgbe e mesịrị na, ị ga-ahọrọ gị onwe gị na-apụta Amazon keyword tracker ngwá ọrụ n'okpuru ọ bụla ọnọdụ - dị nnọọ izere na-eduhie eduhie na a kama skewed set nke data wetara si ọtụtụ dị iche iche na isi mmalite na-adịghị enwe inwe ike zuo nzube.
Ọ bụ ezie na ngwá ọrụ ọkpụkpọ Amazon ọbụla anaghị esote n'efu (ọ na-efu ihe dịka dollar 20 kwa ọnwa), ọ na-akwụ ụgwọ , n'ezie. FreshKey keyword suggestion tool can become a nice spot to finally go on with more targeted keyword ideas, bara uru ma na-emetụta ọdịiche, LSI ogologo-tail Keywords, nakwa dị ka n'ezie kemfe categorization - na-abịa karịrị ihe mbụ echiche nke Search Ngini njikarịcha. Kama ịkwado onwe gị naanị otu ngwá ọrụ bụ isi, ma ọ bụ na-atụgharị ego na nhọrọ ọ bụla ọ bụla dị elu na nkwụghachi ụgwọ, ana m akwado ịnwale FreshKey dị ka ihe na-enweghị ngwụcha nke na-emeri isiokwu ọbụla na ihe bara ezigbo uru mgbe ọ na-abịa n'iwepu okwu ọ bụla na-adịghị mma nke nwere ike na ị ga-eme ka ogo gị dị na Amazon.
Ngwá ọrụ Amazon Amazon Tracker ngwa ngwa maka taa bụ Soovle, ihe ngwọta dị mfe ma dị mfe iji mee ka ndepụta ngwaahịa gị bụrụ ihe ọ bụla na-adịbeghị anya n'ejighị oge dị ukwuu na nnyocha ntuziaka. Chọpụta ihe nyocha kachasị achọpụta nke ndị na-ere ahịa na-eme kwa ụbọchị na Amazon, ma na ntaneti ndị ọzọ na-ewu ewu, dị ka eBay ma ọ bụ ụlọ ahịa Alibaba.Kedu ihe ọzọ - onye inyeaka a na-enyocha nwere ike igosi ya kachasị akụkụ karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-atụle ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-akwado nkwa isiokwu na ịnwale nchịkọta ọchụchọ nke kachasị ewu ewu nke ndị ọrụ ndụ na ọtụtụ engines ọchụchọ Source .